Imigangatho emibini, iSeaside Stone Villa - I-Airbnb
Imigangatho emibini, iSeaside Stone Villa
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguErniv
Le yi-villa ye-square yeemitha ezingama-270. Yakhiwe ikakhulu ngamatye kunye nemithi. Kukho amagumbi okulala ama-3, igumbi lokuhlala elikhulu kakhulu elinekhitshi, amagumbi okuhlambela amabini kunye neeterras ezimbini ezinkulu ezineSeaview. Iyakwazi ukuhlalisa iindwendwe ezisi-8. Uluhlu lolwe villa yonke.
Kukho amagumbi amabini okulala amabini kunye negumbi elinye lokulala elinesithathu. Kwakhona kukho ibhedi enye eyongezelelweyo kuyo nayiphi na imeko. I-sofa kwigumbi lokuhlala iba yibhedi yokumkanikazi ukuba ufuna.
4.72 · Izimvo eziyi-30
IQeparo yenye yezona ndawo zithandwayo ngabakhenkethi eAlbania. Yahlulwe yangamacandelo amabini, ilali eNtsha kunye neNdala yaseQeparo. Ilali eNtsha iselwandle kwaye yakhiwa ngo-1950 nasemva kwayo. IQeparo endala ikwimitha engama-350 ngaphezu komphakamo wolwandle kwaye izindlu zakhiwa ngenkulungwane ye-17.
Umbuki zindwendwe ngu- Erniv
Ndizakuqhagamshelana nondwendwe ngayo nayiphi na ingxaki abanayo.